Ukuzilungiselela kanjani ekudleni
Ukuze banciphise isisindo noma bathuthukise impilo yabo, abaningi banquma ukuhamba ekudleni. Kodwa-ke, ukuze uthole umphumela oyifunayo bese uletha icala kuze kube sekupheleni, kufanele uzilungiselele ukudla. Kulokhu, kuneminye imithetho eyokusiza ukuba uphumelele futhi ulahlekelwe isisindo.
Noma yiziphi izinguquko ngendlela ejwayelekile yokuphila zihambisana nokulahlekelwa amandla angokwenyama nangokwengqondo. Ngokuvamile lokhu kunzima ukubekezelela, ikakhulukazi uma kunezinkinga ezikuzungezile emsebenzini, izinkinga zomndeni noma ezinye izimo ezicindezelayo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uhambe ekudleni, qiniseka ukuthi unamandla, isikhathi namandla okunikeza ukudla okudlule isikhathi esithile sokuphila.
Bheka emuva esidlule
Mhlawumbe awusiyo okokuqala ukukhetha ukuhamba ekudleni. Ungadangali uma imizamo yangaphambilini ayiphumelelanga, funda emaphutheni. Zibuze ukuthi kungani umzamo wangaphambilini wokuya ekudleni waba yihluleka? Kungani kungatholakali umphumela oyifunayo? Yini evimbelekile, yini eyayivimbela?
Buyela emuva, uma ihhovisi lakho noma indlu ivele ihlanganiswe nemikhiqizo yokudla futhi uyadonsela kubo, kuyoba nzima kakhulu ukumelana nalesi sifiso. Khona-ke ukudla kungabangela ukuphazamiseka okuningi ngisho nokuhlukunyezwa. Hlanza imvelo futhi uqede ingozi, okungukuthi, ukudla okungenampilo. Futhi uma imikhiqizo ingenzelwe wena, kodwa isibonelo izingane, bese uthengisa izinto ezinjalo ongazithandi, futhi isilingo sokuzidla asivuki.
Thola ukwesekwa okujulile
Khumbula ukuthi abantu abashiya isisindo futhi abazange babuyisele futhi babe nokusekelwa okuqinile ngendlela yomndeni, abangane, osebenza nabo emsebenzini. Lokhu kwasiza ukuzigcina ngibheke. Thola ukusekela okufanayo okuqinile, futhi uma kungekho okuzungezile, ungajoyina elinye lamaqembu okulahlekelwa kwesisindo kwenye indawo noma kwi-inthanethi. Into eyinhloko ukuthi awuyedwa, kodwa nabantu abanomqondo ofanayo. Kanye, kuzoba lula ukunamathela enkambweni ehlosiwe, ukuqinisa isinqumo sokulahlekelwa isisindo, njll.
Yiya emigomweni yangempela
Khumbula ukuthi injongo yokudla kufanele ibe yinto yangempela. Futhi uma uzibekela umgomo ongenakwenzeka, ngokushesha uzoholela ekushiyeni umqondo ngokudla, imizwa ecasulayo futhi, mhlawumbe, ukucindezeleka. Noma kunjalo, ungasheshi ukuyeka yonke into ngesikhathi esisodwa. Esimweni esinjalo, kufanele ufune usizo olufanelekayo oluvela ku-dietitian. Futhi khumbula njalo ukuthi uma ufuna ukulahlekelwa isisindo ngendlela efanele futhi ngaphandle kwemiphumela emibi emzimbeni, khona-ke ukulahleka kwesisindo esihle ngesonto yi-800 amagremu, kuphephile futhi kuphumelele.
Uzoba nomphumela omuhle uma ungahlanganisa ukudla nokusebenza ngokomzimba. Yakha uhlelo lokuzivocavoca, ukwandise umsebenzi wakho wansuku zonke. Yenza okuthandayo. Kungaba ukudansa ngisho nokulima. Ukwandisa umthwalo ungabukhali, ngokushelela: hamba imizuzu engu-10. kathathu ngeviki kungathathwa indawo emizuzu engu-15. emva kwamasonto ambalwa. Noma engeza usuku lwesine esimisweni sokuhamba.
Shintsha indlela yakho yokuphila kancane kancane
Yethula izinguquko endleleni yakho yokuphila kancane kancane, welula amaviki ambalwa. Lokhu kuzosiza ukuvumelanisa umzimba wakho nemithetho emisha yokuphila kalula. Isibonelo, isonto lokuqala elizinikele ekushintsheni ukudla, okubeka phambili izithelo nemifino. Isonto elilandelayo zama ukuthuthukisa umkhuba othile, ukunciphisa ingxenye yokudla noma ukunciphisa ukusetshenziswa kwamanoni.
Ngokuvamile, ngemva kokudla, abantu baqala ukuzizwa bengakhululekile. Futhi ekugcineni baphonsa umqondo wokuqeda amakhilogremu engeziwe, kanti imikhuba ethuthukile iholela engelutho. Kodwa-ke, ungagxila emizweni emibi, thola okuhle ekudleni. Bheka isimo lula, isibonelo, njengokuzama ukulungisa izitsha ezintsha ezihlwabusayo kakhulu futhi uthande ngisho nezingane zakho.
Kulo mpilo wonke umuntu uyiphutha, ungazitshisi uma okuthile kungasebenzi. Hlola phambili nethemba, phakamisa umgomo wakho, ngoba noma yimuphi umuntu angenza iphutha, lokhu kuyinto evamile. Thola amaphutha, amaphutha, ngaphezulu njengoba isithiyo esilandelayo sidlulile.
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngaphandle kokwenza imizamo ekhethekile?
Ukuzivocavoca imilenze, iziqhwa namathambo
Amakilasi e-Yoga ngenani elihle
I-skipping ngentambo yiyona simulator elula ekhaya lakho
I-Top-4 fashion winter ski suits 2016-2017
Ukudla okuncane kokudla kwesisindo: izinzuzo kanye nokudla komsoco we-fractional
Isaladi "i-Pine twig"
Amaphutha amakhulu abesilisa abesilisa ocansini
Ukupheka: izitsha zesibili ezivela eTurkey
Ukufunda indlela yokusebenzisa izimonyo zokuhlobisa ngokufanele
Izimali eziphezulu kakhulu ze-3 zokwenza ama-daytime azikho ngaphezu kwe-ruble 1000
Isaladi e-crispy ne-pine nati
Izindlela eziphumelela kakhulu zokulungisa ukuma
Yini ongayenza ukuba uchithe izicathulo, iziphi izicathulo ongazitholi
I-Lullaby yengane, umculo wokuzindla nokuphumula
Imithetho yokwakha ukuzethemba okufanele
Umphumela onobungozi we-chips emzimbeni womuntu